Ọrụ mmepụta nhazi ọrụ Glove Production bụ akụrụngwa mmepụta nke buru ibu. Enwere ụfọdụ ihe achọrọ maka ogo ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana akụkụ ọrụ ndị metụtara ya. Chuangmei imewe otu ga-enye ọkachamara na nkà mmụta sayensị uwe p ...
Quanzhou Chuangmei Intelligent Technology Co., Ltd. bụ ihe abụrụ ígwè emeputa emeputa na-amalite, aghụghọ, na-amị nile di iche iche nke nitrile, latex, na ịkwanyere uwe aka ngwá. Anyị nwere tozuru okè technology na zuru ezu mmepụta akụrụngwa. E kewara ogbako a n'ime ...
A na-ekewa Chuangmei glove production line installation and commissioning ọrụ na ụdị abụọ a. 1. Ntuziaka ntuziaka nwụnye: 1) Mgbe ebugharịrị akụrụngwa na akụrụngwa na saịtị ahụ, onye ọrụ ụlọ ọrụ izugbe ma ọ bụ m ...
1. companylọ ọrụ anyị ga-enye akụrụngwa onye ọrụ nyere iwu ka ọ duzie nwụnye na inye ọrụ ruo mgbe arụ ọrụ nkịtị; 2. companylọ ọrụ anyị na-enye ndị ọrụ ọrụ dị mkpa yana ọrụ ọzụzụ mmezi kwa ụbọchị n'efu na installatio ...